Asidra zavona absorber ny mafana niara-nanatsoboka galvanizing tsipika - China Wan Run Da High Tech
Ny fako asidra mandatsa-dranomaso no nitondran'i ny dipoavatra scrubber. Ny asidra zavona absorber dia boribory rafitra amin'ny fehiloha ny PP fillers, tsirairay izay tokony ho 500 mm ny hateviny. Ny tilikambo vatana dia vaky ho telo toko, ny tapany ambany dia ny ranon-javatra tanky fizarana, ny ampahany afovoany dia ny filler fanafody, ary ny tapany ambony amin'ny rano no hihazonany ny fizarana. Toetra mampiavaka ny fanadiovana 1. fahombiazana dia avo sy ny harafesiny fanoherana mahery. Hery avo, feo ambany, ambany fahefana fanjifàna, habeny kely, ...
Ny fako asidra mandatsa-dranomaso no nitondran'i ny dipoavatra scrubber. Ny asidra zavona absorber dia boribory rafitra amin'ny fehiloha ny PP fillers, tsirairay izay tokony ho 500 mm ny hateviny. Ny tilikambo vatana dia vaky ho telo toko, ny tapany ambany dia ny ranon-javatra tanky fizarana, ny ampahany afovoany dia ny filler fanafody, ary ny tapany ambony amin'ny rano no hihazonany ny fizarana.
1. fanadiovana fahombiazana dia avo sy ny harafesiny fanoherana mahery. Hery avo, feo ambany, ambany fahefana fanjifàna, kely habeny, mora disassembly sy ny fikojakojana, maivana sy mateza.
2. Ny asidra absorber zavona na ny fanaka PP vilia eo amin'ny dingana.
3. efatra sosona ny balaonina fonosana sy efatra sosona ny fanafody no ampiasaina mba hahatonga ny mandatsa-dranomaso sy ranon-javatra nifandray tsara, ary ny fanadiovana fahombiazana dia ny 95%. Misy fitaovana amin'ny FRP centrifugal mpankafy sy ny rano paompy natao tamin'ny PP fitaovana, izay harafesiny mahatohitra ary manana asa fanompoana ela velona.
4. Ny maotera amin'ny mpankafy dia fehezin'ny matetika mpanova. Amin'ny alalan'ny tsindry mamantatra amin'ny efitra pickling voaisy tombo-kase, ny mpankafy dia voafehin'ny matetika fiovam-po sy fitsipika stepless haingana mba hamonjy angovo.
Previous: Hydrostastic Testing Equipment - WRD
Next: Hot niara-nanatsoboka Galvanizing-dalana, ho an'ny Steel Sodina
Asidra zavona absorber
China nandrisika sodina milina
Shina nandrisika ny famokarana andalana
China Hot mandroboka galvanizing tsipika
Mitohy Electroplating Galvanizing Machine
Continuous Galvanizing milina
Copper Galvanize Sodina Welding Machine Manufacturer
Fanamainana for Galvanizing Zavamaniry
Electro Galvanizing fitaovam
Galvanic Chrome voapetaka Machine
Nandrisika Carbon Steel Sodina Machine
Nandrisika Carbon Steel Sodina Manao Machine
Nandrisika Lighting Pole Production-dalana,
Nandrisika Lighting Pole Production-dalana, Machine
Nandrisika Lighting Pole Production Machine
Nandrisika Steel Sodina malefaka Conduit Machine
Nandrisika Steel Sodina Making Machine
Nandrisika Steel Production-dalana,
Nandrisika Steel Square Sodina Making Machine
Nandrisika Steel Tube Hanger Making Machine
Galvanizing fatana fandoroana
Galvanizing mpamatsy tsipika
Galvanizing famokarana-dalana, ho an'ny fantsona
Galvanizing fiara mifono vy
Velocity avo Pulse Voaroaka Galvanzing Lafaoro
Hot Dip nandrisika Machine
Hot Dip Galvanizing Fitaovana
Hot Dip Galvanizing-dalana, For Sale
Hot Dip Galvanizing milina
Hot Dip Galvanizing Production-dalana,
Hot niara-nanatsoboka nandrisika
Hot niara-nanatsoboka nandrisika Production-dalana,
Hot Galvanizing milina
Machine Fa nandrisika Steel Sodina
Nail nandrisika Machine
Pretreatment fiara mifono vy
Round Tube Erw welded nandrisika Sodina
Steel Sodina Galvanizing Electro-dalana,
Steel Sodina nandrisika Machine
Steel Sodina Galvanizing-dalana,
Steel Sodina Galvanizing Machine
Steel Tube nandrisika
Zinc Hot Dip nandrisika Machine
Vovoka hetra ny mafana mandroboka galvanizing tsipika